‘चीन चाहँदैन अमेरिका वा इंग्ल्याण्डले कोरोना भाईरसको भ्याक्सिन बनाओस’ : अमेरिकी सासंद | पहिलो बोली
‘चीन चाहँदैन अमेरिका वा इंग्ल्याण्डले कोरोना भाईरसको भ्याक्सिन बनाओस’ : अमेरिकी सासंद
५७०७ पटक पढिएको
शांकेतिक तस्विरः रोयटर्स
कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिएको बेला अमेरिका र चीन बिचमा विवाद फेरि बढेको छ ।
एक अमेरिकी सीनेटरले चीनलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन बनाउने काममा समस्या पैदा गरेको आरोप लगाएका छन् । सीनेटर रिक स्कान्टले आफ्नो बयानमा चीनले पश्चिमा देशहरुले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन तयार गर्न प्रयत्न गरिरहेको कामलाई प्रभावित गरेको बताएका छन् । आफूलाई यस बिषयको जानकारी र सबुत खुफिया समुदायबाट पाएको स्कान्टले बताए । तर, यो बिषयसँग जोडिएको कुनै पनि जानकारी उनले सार्वजनिक गरेनन् ।
यसै बिच चीनले कोरोना भाइरससँग जोडिएको एउटा जानकारी सहितको दस्तावेज जारी गरेको छ । दस्तावेजमा चीनले दावा सहित कोरोना भाइरसको बारेमा अमेरिकालाई गत जनवरी ४ मा नै सूचित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले दुनियाँभर नै फैलिएको छ । दुनियामा कोरोना भाइरुसको संक्रमणका कारण ७० लाखभन्दा मानिस बिमार भएका छन् । संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि चार लाखभन्दा धेरै पुगिसकेको छ ।
अमेरिकी सांसदले के भने?
फ्लोरिडाका लागि रिपब्लिकन पार्टीका सांसद रिक सशस्त्र सेवा होमल्याड सुरक्षा समित तथा अन्य थुप्रै समितिका पनि संसद हुन् । उनले आफूले चीनलाई लगाएको आरोपका बारेमा बीबीसीका के एन्ड्रयु मार शोसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीमा उनले भने, ‘हामीलाई सकेसम्म चाडोभन्दा चाडो भ्याक्सिन पत्तँ लगाउनुपर्ने भएको छ । तर, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि हामीलई चीनले भ्याक्सिन बनाउने काममा नोक्सान पुर्याउन चाहन्छ भन्ने सबुतहरु फेला परेका छन् । सबुत अनुसार चीन भ्याक्सिन बनाउने काममा नोक्सान पुर्याउन चाहन्छ वा भ्याक्सिन ढिलो बनोस भन्ने चाहन्छ ।’
स्कान्टले दुई पटकसम्म यो कुरा दोहोर्याएका थिए । उनले भने, ‘चीन कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अमेरिकाले बनाओस वा इंग्ल्याण्ड वा अन्य युरोपेली देशमा सुरुवातमा बनोस । चीनले अमेरिका र दुनियाँका अन्य देशको लोकतन्त्रको लागि बिरोधी भन्ने फैसाला गरेको छ ।’
स्कान्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कट्टर समर्थन हुन् । जब उनलाई उनले लगाउने आरोपको कारण के हो र सबुत के हुन भनेर सोधियो, उनले भने, ‘सबुत खुफिया समुदाय र सशस्त्र सेवा मार्फत पाईएको हो ।’
उनले अहिले ती सबुतको बारेमा चर्चा गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘इंग्ल्याण्ड र अमेरिका सबैभन्दा पहिला भ्याक्सिन बनाउने छन् । हामी यसलाई बाढ्ने पनि छौं । तर, चीन यस्तो केही पनि चाहँदैन् ।’
के हो पृष्ठभूमि?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनले लगातार चीनको आलोचना गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई लिएर चीनले अपनाएको तरिकालाई ट्रम्पले कैयौं पटक आलोचना गरेका छन् । कैयौं पटक ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चाइना भाइरस समेत भनिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो एक बयानमा आफूसँग चीनको ल्याबमा कोरोना भाइरसको निर्माण भएको भन्ने प्रमाणीत गर्ने सबुत भएको बताएका थिए । उनले कैयौं पटक कोरोना भाइरस चीनको वुहान शहरको एक ल्याबमा बनाईएको बताएका थिए । चीनको वुहानमा नै सबैभन्दा पहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो ।
अर्कातिर, अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पाम्पियोले पनि यो कुरालाई साबित गर्न अमेरिकासँग पर्याप्त सबुत भएको बताएका थिए । जब कि चीनले भने अमेरिकाको हरेक कुरालाई अस्विकार गरेको थियो ।
फाइव आइज खुफिया गठबन्धनले पनि कोरोना भाइरस चीनमा बनेको भन्ने विषयमा कुनै सबुत नभएको बताएको थियो । यो संगठनमा ब्रिटेनसँगै अमेरिका पनि शामिल छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यहि कुरा बताएको छ । तर, कुरा कोरोना भाइरससम्म मात्रै सिमित छैन् । अमेरिका र चीनको बिचमा भइरहेको बिबादको एउटा कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि हो ।
ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई सुरुवातमा नै फैलिनबाट रोक्न असमर्थ रहेको आरोप लगाएका थिए । ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई चीनको कठपुतली समेत भएको आरोप लगाएका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग नाता तोड्ने घोषणा गदै ट्रम्पले भने, ‘हामीले डब्ल्युएचओमा व्यापक सुधारको अनुरोध गरेका थियौं । तर, उनीहरु यस्तो गर्न असमर्थ रहेका छन् । आजबाट हामी विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको आफ्नो नाता तोडिरहेका छौं । अमेरिका अब यो अनुदान वैश्विक पब्लिक हेल्थमा खर्च गर्ने छ । डब्ल्युएचओ पूर्ण रुपमा चीनको नियन्त्रणमा छ, जबकी अमेरिकाको तुलनामा चीन उसलाई सामान्य अनुदान मात्रै दिन्छ ।’
यस पछि ४ जुनबाट अमेरिकाको यातायात विभागले अमेरिकाबाट चीन आउने उडानलाई १६ जुनबाट प्रतिबन्द लगाईदियो । उनीहरुका अनुसार यो कदम चीनले अमेरिकी उडानलाई चीनमा प्रवेश गर्न नदिएका घटनाको जवाफ थियो । यो बाहेक अमेरिका र चीनको बिचमा लामो समयदेखि चलिआएको व्यापार युद्ध पनि यसको पृष्ठभूमिमा रहेको छ ।
चीनको तर्फबाट के कुरा आएको छ?
अहिलेसम्म अमेरिकी सीनेटर स्कान्टको आरोपलाई लिएर चीनबाट कुनै पनि बयान आएको छैन । तर, चीनले जारी गरेको नयाँ दस्तावेजमार्फत आफूले गरेको कामको बारेमा भने स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ । चीनले ४ जनवरीमा नै अमेरिकालाई कोरोना भाइरसको बारेमा सुचित गराईसकेको दाबी गरेको छ । यो बेला संक्रमण अहिलेको जस्तो फैलिएको थिएन्, भर्खर सुरुवाती अवस्थामा थियो ।
दस्तावेजसँगै चीनले एक टेलिफोन ब्रिफिङलाई पनि समावेश गरेको छ । यस टेलिफोन ब्रिफिङमा चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनका प्रमुख र अमेरिकी समकक्ष बिचको कुराकानी जोडिएको छ ।
चीनका अनुसार अहिले सार्वजनिक भएको दस्तावेज तयार गर्दा पारदर्शिता राखिएको छ र जिम्मेवारीका साथ तयार गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनको प्रयासलाई राम्रो मानेको छ । चीनले कोरोना भाइरसको प्रसारलाई नियन्त्रित गर्न र फैलिनबाट कम गर्नमा मद्दत गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई रहेको छ । योसँगै चीनको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्प प्रशासन अमेरिकामा उब्जिएको महामारीको संकटबाट मानिसको ध्यान हटाउनलाई यस्ता आरोपहरु लगाईरहेको भनेर आफू माथि लागेको आरोपको खण्डन गरेको छ ।
तर, अब भ्याक्सिनको के हुन्छ ?
दुनियाँभरका दर्जनौं समूहहरु भ्याक्सिन तयार गर्नमा लागिपरेका छन् । केहीले भने क्लीनिकल ट्रयाल गरिरहेका छन् ।
पहिला मानव परीक्षणको तथ्यांक सकरात्मक देखिएको थियो, जसमा बिरामीको शरिरमा भाइरसलाई निस्क्रिय बनाउने एन्टीबडिहरु देखिएको थियो । तर, अहिले कसैले पनि यो कति प्रभावकारी छ भन्ने बुझेको छैन ।
हुनसक्छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्यास्किन तयार हुनमा एक वर्ष लाग्ला वा केही विशेषज्ञले भनेको जस्तै २०२१ को सुरुवातमा नै भ्याक्सिन तयार होला । तर, अहिले नै यहि हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था भने छैन् ।
-बीबीसी हिन्दीबाट नेपालीमा भावानुवाद